Nka na ụzụ University of Munich - Study Engineering na Germany
Nka na ụzụ University of Munich
Nka na ụzụ University of Munich Nkọwa
tọrọ ntọala : 1868
Echefukwala atụle Technical University of Munich
Idebanye aha na ụzụ University of Munich
Nka na ụzụ University of Munich bụ otu n'ime Europe si n'elu mahadum. Ọ na-agba mbọ iji mma na nnyocha na izi, interdisciplinary ọmụma na-arụsi ọrụ ike nkwalite nke Ná ekwe na-eto eto ndị ọkà mmụta sayensị. The mahadum na-forges ike na njikọ na ụlọ ọrụ ndị na nkà mmụta sayensị na oru gafee ụwa. TUM bụ nke mbụ mahadum na Germany na-aha ya bụ a University of Ọkasị. Ọzọkwa, TUM mgbe nile kwubara n'etiti ndị kasị mma European mahadum mba na mba rankings.
Welcome to ụzụ University of Munich! Anyị mahadum na-aga azụ ka okobot afọ nke 1868, na echiche ya dunyere pụtara ya uru site na afọ: magburu onwe agụmakwụkwọ na nkà mmụta sayensị na teknuzu ọzụzụ, nyere ike nke ndọrọ na njem nke na research, ịzụlite ma àgwà mmadụ na a na-akọrọ omenala. N'etiti ndị na-amụ, kụziiri, na-eme nnyocha ebe a bụ na-akwanyere ùgwù na ọnụ ọgụgụ nke akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga na ugbu a: Nobel Nrite mmeri, -echepụta injinia, oru buu igba n'ulo, -eduga ọkụ ndị yiri ndị otú anyị si ebi. Ọtụtụ Alumni onye nwetara agụmakwụkwọ ha na anyị nwere, site ọkwá ha, merela agadi mmepe nke a ihe ọmụma dabeere na otu.
39,081 eto eto na-, 22% percent nke onye si n'èzí Germany, na-amụ na anyị 13 agụmakwụkwọ ngalaba. Ọ bụ na entrepreneurial mmụọ, na ya na-emesapụ aka na keisompi okwu, na-eweta anyị atọ bụ isi ebumnobi na-fruition: na nkà mmụta sayensị mfọn, internationality, na ndi oru itumgbere ahia.
Na ihe ndị nyewooro mahadum ịbanye ka a na-akwanyere ùgwù ọnọdụ na ụwa ogbo bụ a siri ike echiche nke obodo na-akwalite talent na arụmọrụ ma na-amataghị generational ókè. One anya àmà nke TUM ezinụlọ ịdị n'otu bụ na anyị nwughari nke mkpọmkpọ ebe nke a World War na ya bibiri ruo 70 percent nke mahadum. Taa TUM nwere n'elu nnù ụlọ na ya mkpofu na anyị na Munich, Garching, na Freising-Weihenstephan saịtị.
Nka na ụzụ University of Munich na-aghọta na ya kwesịrị bú orù a ọha mmadụ na-na-chere ihu ịma aka ndị ọhụrụ ịda site ọganihu nke ụwa ọnụ. Nke a pụtara na e nyochawa eru eto eto ndị ọkachamara si ọtụtụ ọzụzụ ndị na-kwekọọ n'otú, na interdisciplinary ụzọ, ka isi mbipụta nke narị afọ: ahụ ike na oriri na-edozi; ike, ihu igwe, na gburugburu ebe obibi; eke ego; agagharị na akụrụngwa; nkwurịta okwu na ọmụma. Anyị nakweere ndị a “na narị afọ themes” dị ka anyị onwe anyị, ha chọpụta anyị research ebumnobi.
The institutional atụmatụ mepụtara maka German Ọkasị Initiative na 2006 - “TUM. The entrepreneurial University” - Meghere ọhụrụ ụzọ iji ghọọ a ji obi ike asọmpi mahadum nke mba gbara ajọ dimkpa. The TUM Graduate School dunyere-aga n'ihu format nke a ahaziri doctoral mmụta. Ọ na-enyere nwa ọkà mmụta sayensị na ndị injinịa ịzụlite ma ha inye profaịlụ na nabatara umu, transdisciplinary horizons. Na TUM Institute for Advanced Study, magburu onwe talent chọta ihe nnyocha, ohere dị ka nke ọma dị ka ụlọ maka interdisciplinary okwu. Na ọhụrụ anyị ọrụ usoro, na TUM Faculty n'umu Track (2012), anyị ẹkenam a paradigm nnofega ke German mahadum usoro.
Ndị na-amụ na ụzụ University of Munich taa nwere ọtụtụ nhọrọ. Anyị bụghị nanị na-enye a mbụ na klas inye ọzụzụ, , meekwa ka obodo-ụlọ eme n'ofè adị kwa ụbọchị na-amụrụ ndụ. Anyị na-ewebata anyị na ụmụ akwụkwọ na-nnyocha sayensị na nzọụkwụ mbụ. Anyị duru ha gaa a mgbe nile ichọ ijide maka ọhụrụ na-achọpụtaghị. Anyị itinye ego oge, ike, na ego na nkà na-eto eto bụ ndị anyị ịzụlite na ịma aka. Anyị chọrọ ime ka ha, dị ka o kwere, “weatherproof” n'ihi na ihe nile ha nwere ike izute ná ha ọrụ ga-eme n'ọdịnihu.
N'ụlọ anyị na peeji nke aims agwa gị emejuputara banyere Technische Universität München, ma n'otu oge n'inye echiche nke ndị anyị bụ ka a obodo. TUM: nke pụtara na anyị nile! Anyị ụzọ guzo na-emeghe ka ị.
Prọfesọ Wolfgang A. Herrmann
Civil, Geo na Environmental Engineering
Egwuregwu na Health Sciences
1868 University tọrọ ntọala site na King Ludwig II.
1877 Ọdịda nke designation Royal Bavarian Technical University of Munich.
1901 N'eziokwu ikike award doctorates.
1902 Ihu nke ntuli aka nke isi site ozizi mkpara.
1930 Integration nke College of Agriculture na-akpọtụ na Weihenstephan.
1949-1954: Nwughari nke isi ụlọ nke Technische Universität site Robert Vorhoelzer mgbe WWII. Construction nke a ọhụrụ administrational ụlọ na n'ọbá akwụkwọ.
1957 Nyere ọnọdụ nke a 'ọha iwu ahụ'.
1958 Research chernobyl Munich (FRM), Garching eze kenyere nke München.
1967 Oruru nke a ngalaba nke na nkà mmụta ọgwụ
1970 Renamed ka 'Technical University of Munich'.
1993 Oruru nke a ngalaba nke informatics
2000 Establishment of Weihenstephan Science Center for Life & Food Sciences, Land Use na Environment (ịba ọcha n'anya) esịnede TUM.
2002 The German Institute of Science and Technology hiwere na Singapore.
2004 Official oghere nke nnyocha chernobyl Munich II, a na-eduga neutron iyi, on March 2.
2005 TUM Institute for Advanced Study tọrọ ntọala
2006 TUM otu n'ime atọ nke ọma na mahadum na Germany mma igba
2009 TUM School of Education ike
2012 TUM ọzọ otu n'ime ugbu a 11 ihe ịga nke ọma na mahadum na Germany mma igba
Ị chọrọ atụle Technical University of Munich ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Nka na ụzụ University of Munich na Map
photos: Nka na ụzụ University of Munich ukara Facebook
Nka na ụzụ University of Munich reviews
Jikọọ na-atụle nke nka na ụzụ University of Munich.